यी ५ चीज, जसले सजिलै हटाउँछ मोटोपन
असोज २४, २०७७
मोटोपनका कारण तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस्, घरभित्रै यसको औषधी पाइन्छ । मोटोपनलाई कम गर्नका लागि भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तुहरू नै लाभदायक हुन्छन् ।
दालचिनी :आयुर्वेदमा दालचिनीको प्रयोग कीटाणुनाशक, दुखाइको कम गर्न प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी वजन कम गर्नको लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसमा भएको तत्वले मेटाबोलिज्मलाई बढाउँछ भने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन पनि सहयोग गर्छ । बिहान उठेपछि सबैभन्दा पहिले दालचिनी राखिएको पानी पिएमा यसले भोक कम गर्छ भने कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत कम गर्दछ ।
कालो मरिच–आयुर्वेदका अनुसार कालो मरिचले तौल कम गर्न निकै प्रभावकारी हुन्छ । यसले शरीरको ब्लोकेज घटाउँछ भने सर्कुलेशनलाई सुचारु राख्न मदत गर्छ । यसले मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ ।
अदुवा–आयुर्वेदका अनुसार अदुवाले मेटाबोलिज्मको मात्रा २० प्रतिशत बढाउँछ । यसले पेटलाई स्वस्थ समेत राख्दछ । यसले मोटोपनसमेत घटाउन मदत गर्छ । यसले शरीरको टोक्सिनलाई बाहिर निकाल्छ । यसमा ज्वलन कम गर्ने एन्टी ब्याक्टेरियल तत्व हुन्छ । अदुवाको निरन्तर सेवनले तौल घट्नुका साथै स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुन्छ ।
कागती–खानामा राखेर वा सलादको रूपमा सेवन गरेमा कागतीले तौल घटाउन सहयोग गर्छ । कागतीमा हुने भिटामिन सी र फाइबरले स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा हुन्छ ।
मह –विस्तारामा जानुभन्दा केही समय अगाडि महको सेवनले क्यालोरी कम गराउँछ । यसमा हुने हार्मोनले भोक कम लगाउँछ भने तौल कम गर्न पनि सहयोग गर्छ । यसले शरीरको मोटोपन घटाउन पनि सहयोग गर्छ ।
पेट घटाउने पाँचवटा उपाय
कानको संक्रमण हुनसक्छ क्यान्सरको संकेत, यसरी थाहा प...
एकदम छिटो छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? अपनाउनुस् य...
पेटका लागि वरदान हो मेवा, जान्नुहोस्- मेवाका ५ फाइदा
अर्थतन्त्र 'भी' आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ, सबैले मेहनत गरौँ : अर्थमन्त्री पौडेल [अन्तर्वार्ता]
छोरीलाई वैवाहिक झमेलाको सन्त्रास र पुरुषको पीडा : कसरी छान्ने उपयुक्त जीवनसाथी ?
के हो ‘रअ’ : इन्डियन रणनीति कि नेपालको दुर्भाग्य ?
बडा दशैंको अनेक सन्दर्भ : नारीहरु यसरी भगवान कहलिए
उपचार नगर्ने अस्पतालको अनुगमन गरिँदै
ह्याप्पी बर्ड थे म्यारोडोना !
बङ्गलादेशमा कति पुगे संक्रमित ?
सफल भयो हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रयास, २५० घर झिलिमिली
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जिते कोरोना
कोरोना संक्रमण निको हुने दर ७६ दशमलव ९ प्रतिशत, तीन जिल्लामा शून्य संक्रमित
मोटरसाइकल दुर्घटनामा १ जनाको ज्यान गयो
काँग्रेस सांसद विश्वकर्माको उपचारमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोन
ईमेल :lo[email protected]